Snapdragon 855: Qualcomm processor-kiisii ​​ugu horreeyay 7nm oo leh 5G | Androidsis
Snapdragon 855 hadda waa rasmi: processor-ka cusub ee loogu talagalay dhamaadka-sare
Dhamaadkii Nofeembar warku wuxuu soo baxay, waxaa la filayaa taas U qalmid bixi si aad u soo bandhigto processor-keeda cusub ee loogu talagalay dhamaadka dhamaadka si rasmi ah 4-ta Diseembar. Ugu dambayntiina maalintii ayaa timid oo waxay noqotay. Dhowr daadin ka dib maalintii oo dhan shalay, habeenkii Waxaa si rasmi ah loo soo bandhigay Snapdragon 855. Waa processor-ka cusub ee summaddiisu cusub tahay, kaas oo xukumi doona qaybtan suuq ee ku jirta Android sannadka 2019.
Snapdragon 855 waxay u taagan tahay inay keento horumarinno kala duwan oo muhiim ah kii ka horreeyay. Qualcomm wuxuu naga tagayaa processor xoog leh, oo leh joogitaan ballaaran oo sirdoon farsamo iyo barashada mashiinka iyo inay doonayso inay si kasta uga sarayso tartamayaasheeda tartamaya. Hesho
Si buuxda u fulinaya, maxaa yeelay chipkan cusub ee ka socda Qualcomm wuxuu durba la baxayaa aragtiyo wanaagsan waxayna umuuqataa inay dhaaftay Exynos 9820 y Kirin 980 markay tahay waxqabadka. Markaa sanadka soo socda ee sare ee Android wuxuu yeelan doonaa processor awood badan oo leh fursado badan.
Snapdragon 855: Waxaa lagu sameeyay 7nm iyo horumarinta AI
Maaddaama ay horeyba u soo ifbaxday munaasabadihii hore, ugu dambayntiina lagu soo bandhigay bandhiggiisa, Snapdragon 855 waa processor-kii ugu horreeyay ee Qualcomm ku soo saaro 7 nm. Waxaan wajaheynaa processor oo diiradda saaraya maaraynta howlaha sirdoonka farsamada. Dareenkan, seddex jibaar awoodda ayaa la ballanqaaday, iyada oo ay ugu wacan tahay soo bandhigida algorithms sawir qaadista xisaabinta. Sidii la filayay, waxay leedahay unug NPU ah oo loogu talagalay maaraynta shaqooyinka sirdoonka farsamada ah.
Tani waa mid ka mid ah isbeddellada ka socda suuqa, kaas oo leh waxay rabaan inay helaan kaamirada ugu fiican, oo leh muhiimad weyn software-ka marka loo eego qalabka. Tan macnaheedu waa in algorithms la soo bandhigo si loo helo qaabab dheeri ah oo sawir ah. Tusaale ahaan, qaabka sawirka ee Pixels wuxuu leeyahay algorithm noocan oo kale ah, kaas oo u oggolaanaya muuqaalada adag in la xalliyo.
Dhinaca sawirada, Snapdragon 855 sidoo kale waa taagan yahay, lama filaan. Qualcomm muuqaalada GPU waxa ay ugu yeeraan Elite Gaming, kaas oo ku wajahan ciyaaraha. Si tan loo sameeyo, hagaajinta u muuqata inay xusuusineyso GPU Turbo waxaa lagu soo bandhigay taleefannada Huawei. In kasta oo sumadda xilligan aysan bixin faahfaahin ku saabsan astaamahan. Xaaladdan oo kale, processor-ku wuxuu adeegsanayaa Adreno 640 GPU, kaas oo ku habboon ciyaaraha.
Muuqaal kale oo processor-ku ku taagan yahay ayaa ah hordhaca ah taageero loogu talagalay akhristaha faraha faraha ee ultrasonic shaashadda hoosteeda. Muuqaal aan ka helno moodooyin badan oo dheeri ah oo ku jira meelaha sare. Sidan oo kale, waxay ku heli doonaan taageeradan 2019, sanad la filayo in aan ku arki doonno muuqaalkan si heer sare ah taleefannada sare ee Android. Thanks to taageeradan, waxay u badan tahay inaan arki doono muuqaalkan marar badan.
Waxaa sidoo kale jira warar muhiim ah oo ku saabsan isku xirnaanta. Sababtoo ah Snapdragon 855 waa kan ugu horreeya ee leh modem X50, taas ayaa ku mahadsan waxay taageertaa / u oggolaan doontaa isku xirnaanta 5G ee isticmaalayaasha. Sidan oo kale, processor-ku wuxuu noqonayaa kii ugu horreeyay ee suuqa siiya taageerada 5G. Iyadoo la tixgelinayo in taleefannada leh taageerada 5G la filayo inay yimaadaan nuska hore ee sanadka soo socda, layaab ma noqonayso in badankood ay isticmaali doonaan processor-kan.
Ku saabsan isticmaalka batteriga waxba lagama sheegin soo bandhigida. In kasta oo processor-rada cusub ee lagu soo saaray 7 nm guud ahaan ay la yimaadaan adeegsiga batteriga oo hooseeya. Marka waxay u oggolaan doontaa dadka isticmaala qaabka sare ee Android inay si hufan u isticmaalaan. Shaki la'aan, faa'iido in lagu xisaabtamo.
Soosaarka Snapdragon 855 ayaa la filayaa inuu dhowaan bilaabmo. U badan tahay at MWC 2019 waxaan la kulannaa telefoonnadii ugu horreeyay suuqa isticmaalaya processor-kan cusub ee Qualcomm. Sideed u aragtaa processor-ka?
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Snapdragon 855 hadda waa rasmi: processor-ka cusub ee loogu talagalay dhamaadka-sare
Sida loo ogaado haddii ay tahay waqtigii loo wareejin lahaa taleefannada Android